Nezvedu - Iyo Kdom
CHIEDZA, RAKANAKA, HAPPY & CUTE.
Aya maitiro ndiwo anotsanangura chimiro chechitoro chedu chepamhepo, Iyo Kdom.
Isu tinopa Kpop Fashion yakapfekedzwa nezvidhori ivo pachavo.
Tinoda kuvaswededza pedyo newe! At Iyo Kdom yatinounza iwe chitoro chakazadzwa nezvakanaka K-POP Fashoni Clothing Apparel & zvishongedzo, kubva ku-t-shirts kusvika kune hoodies kune hats .... isu tine zvese pano kwauri!
Kdom chitoro umo vatengi vanogona kutenga mufashoni yazvino yezvidhori zvavo zvavanofarira. Isu tine hushamwari kwazvo uye tinoshanda pane yedu yepamhepo Facebook & Instagram peji patinoyedza nepatinogona napo kuratidzira zvese zvedu zvechizvino uye zvitsva zvinhu zvinopisa!
Isu tinoedza kuunzira iwe zvipfeko zvakanakisa & zvinhu nemitengo isingadhuri inozoita kuti udzokere zvimwe. Tine chivimbo mune yedu 100% Yakavimbiswa Service!
Isu tinonzwa kuti tinoda kuvaka hukama hwakasimba uye hwakavimbika nevatengi vedu uye ichi ndicho chikonzero tine timu inoshanda yekutsigira inosangana nezvose zvaunoda uye kubvunza.
Isu tinozvirumbidza pachedu nekupa kukurumidza Kuendesa kune zvinhu zvedu. Tinoedza nepatinogona napo kuti mirairo yese igadzikiswe uye kutumirwa nekukurumidza sezvazvinogona.
Isu tinoshanda nesimba zvakanyanya kuti tive nechokwadi chekuti HAPANA matambudziko chero nechero chii zvacho chevatengi.
Kdom yanga iri mubhizinesi pawebhu kubva munaChikumi 2016 uye hatisati tamboona chero zvichemo kana zvinodiwa zvekudzoka.
Inzwa padhuze neako K-POP zvidhori nesu, Iyo Kdom - Yako K-POP Shopping Mall.
Iyo Kdom Social Media
Yedu yekutsigira timu yakadzidziswa zvakanyanya uye inokurudzirwa kupindura kune vese vatengi kubvunza nekukurumidza sezvinobvira
Gara uchivandudzwa neThe Kdom pane yedu magariro enhau akanyorwa pamusoro.